Adeegyada la talinta amaahda / Minnesota.gov
Feature image for Adeegyada la talinta amaahda
Ururada Amaahda Macmiilka
Xarunta Adeegyada Macmiilka Kooxda Jawaabta macmiilka
Greater MN : 1-800-657-3602
Qaybta Adeegyada Dhaqaalaha
weyn MN: 1-800-657-3602
Ganacsiyadan, khidmad ahaan, waxay siiyaan waxbarasho iyo talo loo gaaryeelay macaamiisha. Waxay horumarin karaan qiimaynta daynta ama taariikhda, kaa caawin karaan helida amaahda, oo waxay bixin karaan talada amaahda ama caawimada. Ururadan waa inay adiga ku siiyaan qandaraas sharxaya khidmadooda iyo adeegyada oo waa inay iska diiwaangeliyaan Waaxda Ganacsiga. Ururada sharciga waxay yeelan doonaan la taliyayaal si sax ah u tababaran. Ganacsiyadan macaashka loogu talo galay waa inay ku siiyaan adeegyada ka hor inta aanay kharash kugu soo dalicin. Waa inaanad lacag qadin ah sii bixin noocan ganacsiga ah. Macaamiisha aanu baahnayn daawaynta gaarka waxay heli karaan macluumaad wanaagsan oo miisaaniyad u qoondaynta iyo horumarinta daynkaaga maktabadaha guud ama xafiisyada badan oo adeega bulshada ah.
Ganacsiyada sidoo kale waxay ku soo dalacaan kharash caawinta macaamiisha loo kordhiyay iyagoo horumariyana miisaaniyada iyo helitaanka lacagta macaamiisha si dib loogu bixiyo hoosta qorshaha yaraynta daynka gaarka ah. Shirkadaha ku yaala Minnesota ee bixinaya adeegyada qoondaynta daynka waa inay ruqsada siisaa Waaxda Ganacsigu. Shirkadaha ku yaala gobolka bixinaya adeegyada la midka ah ee internatka ama boosta looma baahna inay ruqsad haystaan. Haddii aad go’aansato inaad isticmaasho shirkada gobol kale, waa inaad la xidhiidhaa wakaalada sharciga ee gobolka si ay u xaqiijiso heerka ruqsada ee shirkada.
Ka hor inta aanad ku biirinin qorshaha yaraynta daynka, hubso inaad akhrido qandaraaska oo aad fahamto sida barnaamijku u shaqeeyo. Waxaad bixin doontaa daynkaaga, heerka la yareeyay oo aad siiso shirkada maaraynta daynka, taas oo la gorgortami doonta amaahiyayaashaada oo kuu samayn doonta lacagbixintaada. Sida ugu wanaagsan ee loola macaamilo ka Minnesota ee ruqsada haysta ee leh xafiis deegaanka ah oo leh shaqaale la heli karo si ay uga jawaabaan su’aalahaaga.
Xaaladaha qaarkood, ururada adeegyada latalinta macmiilka ee amaahda waxay bixiyaan adeegyada shirkada maaraynta daynka siiba adeegyada waxbarashadda iyo la talinta ee ururka adeega daynta.
Dhibaatada iska dhigayaasha kuwa aan “macaash doonka ahayn
Ururo badan oo adeega amaahda sharciga aha (oo isticmaalaya magacyo badan oo kala duwan) waxay ku raaxaystaan heerka aan macaash doonka ahayn, oo macnaheedu yahay inay ku soo dalaci karaan adeegyada lacagta qadinka ah. ka hor bixinta adeega. Caaqibo ahaan, shirkado badan oo khiyaamoolayaal ah oo halkaas u jooga inay lacagtaada kaa urursadaan ayaa waxay iska dhigaan inaanay macaash doon ahayn. Si sharci ahaan loogu qalmo adeega la talinta amaahda ee aan macaash doonka ahayn, wakaaladu waa inay ku siisaa waxabarasho maaliyadeed. Xariifiinta khiyaamada waxaa dhici karta inay kuu soo diraan buugyaraha qorshaynta maaliyada oo ay taas ugu yeedhaan “waxbarasho.” Wakaaladaha sharciga ah waa inay u diyaar ahaadaan inay kula fadhiistaan oo ay kaala hadlaan caadooyinkaaga kharash garaynta oo kaa caawiyaan oo ay qaabeeyaan qorshe cusub oo miisaaniyadeed.
Sida loo helo adeega la talinta amaahda oo sumcad fiican leh
Ka hubso Waaxda Ganacsiga Minnesota si aad u aragto ururka adeega amaahda inuu diiwaangashan yahay ama haddii shirkada maaraynta daynku ay ruqsad haysato.
Soo ogow haddii wakaalada la talinta ay xubin ka tahay urur wayn, sida National Foundation for Credit Counseling or the Association of Independent Consumer Credit Counseling Agencies. Ku xidhnaanta ururadan waxay hubiyaan in wakaaladaha xubinta ay buuxiyaan tayo gaar ah iyo heerarka ansahaxa oo la taliyaasha amaahdu ay helaan tababar wanaagsan.
Dooro wakaalad ku siisa kullan la talin oo is qaabilaad ah si looga hadlo caadooyinkaaga kharash garaynta, habbaysa miisaaniyad oo kaa caawisa maamulida maaliyaada gaarka ah. Ku biirida adeegyada amaahda macmiilka ama qorshaha yaraynta daynka ee telefoonka ama internatka waxa uu hali skuu geliyaa inaad ku waydo lacagta mashruuc khiyaamo ah.
Ku hel heshiiska qoraal, oo akhri ka hor inta aanad saxeexin
Iska ilaali shirkadaha u baahan khidmada qadinka ah (taas oo noqon karta boqolaal doolar) ,“ku tabaruca aan khasabka ahayn” ama khidmada adeegyada sare ee bilaha ah ee wax ku biiriya daynkaaga. Badanka wakaalado badan oo sharci ah waxa uu kharash ku dalacaa $10 ilaa $20 si ay u bilaabaan qorshaha dib u bixinta daynka iyo wax yar $20 bishii oo adeega khidmada ah.
Haddii aad la macaamilayso shirkada maaraynta daynka, hubso in lagugu wargeliyo wax ku saabsan goorta iyo inta ay leegtahay lacag bixinta bilaha ah ee u tegaysa dayn siiyahaaga. Iska jir shirkadaha adeega amaahda ee ula hadha lacag bixitaadaa bisha koowaad lafahooda.
Iska jir ballamaha aan runta ahayn, sida tirtirka daynta ee beesadaha doolarka muddo wakhti yar ah (badanka qorshayaasha yaraynta daynka waxay qaataan labba ilaa afar sanadood inay dib u bixiyaan) ama ballamaha laga noqdo buundada amaahda xun.
Sida had iyo jeer, xusuuso sharciga: Waxay u eegtahay inay aad u wanaagsan tahay inay run ahaato, maangal ahaan way tahay.